Moments leh saaxiibo 19
Waa maxay dhalashada Ilaah ama jiritaanka jaangooyo
Erayga erayga ayaa waxa loola jeedaa waxa soo galay jirka jidhkiisa. Ilaahnimadu waxay ka dhigan tahay ilaahnimada jidhka aadanaha. Cibaadada ilaahnimadu waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah muuqaalada badan ee ilaahnimada qaab-dhismeedka aadanaha, dhacdooyinka ba'an, ama calaamad muujinaysa sida loogu yeedho, ayaa lagu sheegay dhammaan taariikhda diimeed ee weyn. Soo muuqashada muuqaalka ilaahnimadu waxa uu ka soo qaybgalay aasaaska diin cusub, kaas oo magaciisa ka qaada midka muuqaalka ama magaciisa la siiyey isaga oo raacaya raacayaasha danbe. Falsafad ahaan, Ilaah, Maskaxda Guud, ama Mujaahid, waa koox wadaag ah oo ka tirsan Sirdoonka Mujaahidiinta kuwaas oo ka sii daraya baahida loo qabo dib-u-dhiska iyo dhammaanba daciifnimada bini-aadamka iyo jahwareerka. Qeybtan wadajirka ah ee caqliga ah ee ilaahnimada ah ayaa mararka qaarkood looga hadlaa sida Logos. Waqtiga uu xeerku qeexayo, mid ka mid ah kaniisadan Ilaah, ama Universal Mind, ama Ilaah, ayaa u muuqda dhulka si ay u caawiyaan aadanaha horumarkiisa iyo horumarinta xagga dhimashada iyo ilaahnimada. Marka dhacdadan oo kale dhacdo waxaa la yiraahdaa in lagu dhufto badbaadiye avatar ah, Logos, Demiurgos, Maskaxda Universal, Ilaahnimada, Ruuxa Weyn ama Ilaah, sida ku xusan ereyada dadka ku duubaya dhacdada . Waxaa jira falsafad la taaban karo oo la xidhiidha dhacdadan oo kale, waxaana jira darajooyin badan iyo noocyo badan oo ah ilaahnimadiisa. Laakiin si gaar ah uga jawaabista su'aasha ku saabsan jiritaanka ilaahnimadu waxay tahay mid ka mid ah halyeeyada ilaahnimadu waxay ku qaadatay hoygeeda oo ah qof bini'aadam ah oo nadiif ah oo horumarsan, jidh ahaan, maskax ahaan iyo ruux ahaanba, si loo sugo xidhiidhka ilaahnimada.
Muxuu yahay isticmaalka ama shaqeynta jidhka pituitary?
Dhaqan ahaan, fahamka ugu sarreeya ee ku saabsan jirku wuxuu ka dhigan yahay inuu yahay kursiga maamulka ama xarunta nidaamka dareenka. Waxay ka kooban tahay laba lakab, lafaha dambe waa in la helo dhammaan aragtida jidhka ee dareemayaasha dareenka, iyo lafaha danbe ee ay ka imanayaan dareemayaasha maskaxda oo la xakameeyay lana faray. Waxaan dhihi karnaa jidhka pituitary waa wadnaha nidaamka dareenka sida wadnaha muruqu yahay xarunta habka wareegga dhiigga. Marka dhiiggu ka soo baxo wadnaha jidhka iyadoo la isticmaalayo xididada halbowlaha iyo soo noqoshada wadnaha xididdada wadnaha, sidaas daraadeed dareeraha dareeraha ama jirka ayaa ka soo baxa jidhka oo ka soo jeeda jidhka pituitary iyadoo loo marayo habdhiska dareeraha iyo dib ugu soo noqoshada dareemayaasha dareenka jirka jidhka. Jirrada pituitary waa maskaxda maskaxda ee ay bani'aadamka aadanuhu la xiriiraan jidhka jirka, iyo xaruntii uu bani'aadamku bani'aadanku ku dhex maro dawladaha loo yaqaan wakeeriga, riyoodka, iyo hurdada qoto dheer. Marka bani-aadmiga aadanuhu si toos ah u dhaqmo ama la socdo ninkii jidhka ku jira ee loo yaqaan 'pituitary body' waxaa la yiraahdaa inuu soo jeedo oo uu dareemo jirkiisa iyo aduunkiisa ku wareegsan. Marka Ego uu ka fariisto xiriirka degdegga ah ama koontaroolka jidhka, wuxuu sameeyaa si jidhku u nasan karo oo uu dib ugu soo celiyo ciidammada nolosha ee adduunka oo ka soo baxa iyo ka baxa jirka, marka aan la faragelinin xiisadda la keenay iyada oo hawsha maskaxda la socoto ama ku jirta jirka pituitary. Maaddaama maskaxda ama Ego ay xajinayso jidhka ciridka jirka oo ka fariisto xarumaha kale ee maskaxda ku riyoodaan, iyo hurdo qoto dheer ayaa leh shuruudaha dhexdhexaadinta ah.
Waa maxay isticmaalka ama shaqeynta qanjirada cirifoonida?
Labada qaybood ee pituitary iyo caleemaha maskaxda waa unugyada kuwaas oo ah xarumo xiriir la leh nafta qofka. Hase yeeshee, jidhka pituitary waa xaruntan oo si toos ah u isticmaala maskaxda bini'aadamka oo dhan oo u baahan hawlo maskaxeed, qanjirka pineal waa xubin ka mid ah shakhsiyaadka rabbaaniga ah ee badan ee ragga. Jirrada pituitary waxaa loo adeegsadaa dhammaan hababka ratiosinka ah iyo hawlgallada maskaxda oo u baahan waxqabadka jiilalka sababaynta. Qanjirka indha-beelka waxaa loo isticmaalaa marka aqoonta tooska ah ee shayga la helo. Qanjirka caleenta maskaxda waa unugta kaas oo loo keeno fahamka aadanaha in aqoonta iyo xigmadda oo dhammeystiran ay tahay, is-caddayn, iyada oo aan la raacin habka sababaynta. Qanjirka caleenta maskaxda waa unugta loo isticmaalo si caqligal ah oo caqligal ah oo leh qof leh faham ruuxi ah iyo xigmad. Tani waxay khusaysaa ruuxa caqliga leh. Bini'aadamka caadiga ah ee jidhka ayaa loo isticmaalaa iyada oo aan loo aqoon sida ugu dhakhsaha badan ee uu u egyahay inuu u malaynayo laakiin ma yaqaanno sida uu u maleeyo. Ninka caadiga ah ee qanjirka caleenta waa markhaati goob joog ah oo suurtagal ah suurtogalnimada mustaqbal ilaahnimada aadanaha. Laakiin xitaa hadda waa sida aamusnaanta sida xabaashii.
Waa maxay isticmaalka ama waxqabadka beeryarada?
Cudurka waa mid ka mid ah xarumaha maskaxda ama jirka. Beertu waxay si gaar ah ugu adeegtaa nolosheeda hore si loo dhiso xidhiidhka u dhexeeya jiritaanka maadada jirka ah, qaabka cimilada illaa qaab dhismeedka jirka ee arrinka jireed, iyada oo loo marayo habka wareegga. Waxay ku xiran tahay wareegga dhiigga iyo habka lenfiga. Ka dib marka jirku ku xiran yahay caadooyinka iyo qaabka jidhka ayaa si cad loo aasaasay, beeryarada ayaa la bixin karaa sababtoo ah jidhka qaabka cirridka ayaa markaa ka dambeeya qayb kasta oo jirka ka mid ah.
Waa maxay isticmaalka ama shaqada qanjirka thyroid?
Qanjirka 'thyroid' waa mid ka mid ah xarumaha jidhka kaas oo ah qofka u shaqeynaya inuu jidhkiisa ku dhaqmo kahor dhalashada. Waxay si toos ah ula xidhiidha jidhka pituitary waana kaydka kaydka ama bakhaarka kaydinta taas oo la xoreeyay maadooyinka kiimikada qaarkood ee lagama maarmaanka u ah dhismaha lafaha jidhka, waxayna sidoo kale haysaa tincture oo wax ka sameeya dhiigga. Qanjirka 'thyroid' waa xubin uu maskaxda ku dhaqmo jirka. Qanjirka 'thyroid', 'pituitary body' iyo 'pineal gland' waa inay sameeyaan qaabdhismeedka lafaha jidhka iyo maskaxda. Marka qanjiradani ay saameeyaan fara-galinta ficilka caadiga ah ee maskaxda iyo xaalado badani waxay keeni karaan dhimasho ama saameyn ku yeeshaan maskaxda si ay u keenaan ku-meel-gaar ah ama aberrations maskaxda.